एक घर घरमा पाइपलाइन को लेआउट: योजनाहरू, सामाग्री र स्थापना। पाइपलाइन काम
ताराहरु पाइपलाइन प्रमुख मरम्मत को कार्यान्वयन लागि वा क्षति पाइपलाइन को मामला मा आवश्यक हुन सक्छ। उपलब्ध उपयुक्त उपकरण छ र यो ह्यान्डल गर्न सक्षम हुन - यो प्रक्रिया बाहिर मुख्य कुरा हो, विशेषज्ञहरु को संलग्नता बिना स्वतन्त्र लगे सकिन्छ। एक preconceived योजना उत्पादित काम, धेरै चरणमा विभाजित। यो संचार को तत्व को व्यवस्था समावेश, तपाईं आफ्नो योजना बनाउन, वा सान्दर्भिक स्रोतको फेला गर्न सक्नुहुन्छ।
ताराहरु नलसाजी: सुरुवात
सबै को पहिलो तपाईं आवश्यक संचार र सेनेटरी उपकरणहरू सूची बनाउन आवश्यक छ। उदाहरणका लागि, वाशिंग मिसिन र शौचालय को लागि, र सिंक र स्नान सानो घर (स्नान) थप तातो पानी आपूर्ति भएको छ चिसो पानी आपूर्ति र सीवरेज जडान आवश्यक छ। पाइपलाइन र योग्य काम ताप माग, गैर-अनुपालन रूपमा धेरै अप्रिय परिणाम निम्त्याउन सक्छ।
यो पनि तत्व आवश्यक एक लुगा धुने मेसिन, तातो र चिसो पानी गर्न गाडी मा माउन्ट छन् जस्तै, अतिव्यापी ढोकाहरू को मात्रा निर्धारण गर्न आवश्यक छ। इच्छित भने, तिनीहरूले शौचालय गर्न पानी आपूर्ति मा माउन्ट हुन सक्दैन, यो मरम्मत कुल पानी आपूर्ति कवर गर्न आवश्यक छैन रूपमा, विशेष गरी एक ट्यांक को टूटना को मामला मा उपयोगी छ।
पाइपलाइन काम गर्दछ: मूल्य
जब सबै उपकरणहरू र कार्यन्वयनका लागि पाइप पूरा प्रतिस्थापन धेरै दिन लाग्न सक्छ। धेरै, सेवा को लागत मा रुचि यसलाई धेरै कारक निर्भर:
काम र यसको कार्यान्वयन लागि छुट्याइयो समय को जटिलता;
स्थापित उपकरणहरू, सम्मेलन र अन्य कोर घटक संख्या;
उदाहरणका लागि, एक मानक डाली-फलाम स्नान भन्दा बढी जटिल स्थापित गर्न व्यापक कार्यक्षमता संग शवर जटिल। लागत पनि थप सेवाहरू प्रयोग संग बढ्छ।
पाइपलाइन मा दर फरक व्यवसायीक र कम्पनीहरु लागि फरक हुन सक्छ। औसत डुब्नु स्थापना मा 1700 rubles लागत, र एक मानक मिक्सर विधानसभा हुनेछ - 800 rubles। छनौट गर्दा एक कम्पनी सेवाहरूको मूल्यमा, तर पनि कार्यकर्ता को व्यावसायिकता मात्र छैन ध्यान गर्नुपर्छ पनि विशेष स्रोतहरू मा समीक्षा जाँच्न superfluous हुने छैन।
पाइपलाइन र यसको अधिग्रहण को प्रकार चयन गरेपछि, तपाईँले सबै उपकरणहरू को नियुक्ति निर्धारण हुनुपर्छ। यो कोठा मा ल्याउन र आफ्नो स्थान को सुविधा सुनिश्चित गर्न कम्तिमा केही तत्व को मानिन्छ साइटमा राख्न मनमोहक छ। अर्को, कागज चार्ट ताराहरु पाइपलाइन को एक पाना, यसरी यो आवश्यक खातामा सुविधा र नियमहरू केही लिन छ:
जल लागि नल ठाडो भाग बिना "टि" को रूप मा गर्न सकिन्छ;
मुख्य नाली पानी नल लागि हो यो देखि Tees मार्फत, तल को सतह माथि स्थित छ;
पाइपलाइन व्यवस्था लचिलो hoses र पाइपिंग को जडान ठाउँहरू पहुँच प्रदान गर्नुपर्छ;
ढल र पानी पाइप तिनीहरूले एक विशेष वाहिनी पछि लुकाइन् गर्न सकिन्छ भनेर, एकअर्कालाई गर्न सकेसम्म नजिक हुनुपर्छ;
पाइप को चौराहे सिफारिस गरिएको छैन र पनि जडान गर्न सजिलो तरिका र पाइपलाइन हुनुपर्छ;
ताराहरु पाइप गाह्रो हुँदैन, यो स्वतन्त्र व्यायाम लागि अनुमति आवश्यक छ।
तिनीहरूले स्थापना को जटिलता आधारमा र प्रकार बिछाउने चयन गरिएका छन् विभिन्न सामाग्री छन्।
polypropylene संग ताराहरु पाइपलाइन पाइप एक टांका फलाम भनिने विशेष उपकरण प्रयोग गरेर उत्पादन। यो प्रश्न वा किन्न माल बेचन पसलहरूमा मा भाडामा गर्न सकिन्छ। पहिलो विकल्प एकल आवेदन, आवश्यक भएमा थप तर्कसंगत छ। काम गर्दा चरम गर्मी र व्यायाम सावधानी सम्झना गर्न - उपकरण प्रयोग गरेर मुख्य कुरा सरल छ। पनि लायक निर्देशन पढेर। केही अवस्थामा, तपाईंले सहायक हुन सक्छ।
स्थापना पाइप जडान र आवश्यक कोण मा pivoting लागि पीवीसी पाइपलाइन फिटिंग को प्रयोग आवश्यक छ। तिनीहरूले उत्तरार्द्ध को आकार अनुसार चुनिएका छन्। केही अतिरिक्त वस्तुहरू लिएर लायक छ तपाईंले खरिद गर्दा, तिनीहरू असमान टांका को मामला मा आवश्यक हुन सक्छ।
एक टांका फलाम प्रयोग गर्दा परिणामस्वरूप यौगिकों गैर-releasable छन्, र पाइपलाइन भाग कटौती गर्न त्यहाँ कुनै पनि अंतराल हुँदा तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्न। प्रयोग स्लिभ एक अपर्याप्त लम्बाइ भएको एक पाइप निर्माण गर्न।
काम को चरणमा एक यो लचिलो नली गर्न खुवाउनुभयो छ एक हात मा, अन्त विज्ञप्ति विशेष फिटिंग जडान गरिएको छ, र अन्य पाइप तय गरिएको छ।
भवन मा पाइपलाइन को लेआउट दुई मुख्य तरिकामा गरिन्छ:
पाइप टांकना पाइपलाइन उपकरणहरू प्रति riser देखि सुरु हुन्छ।
उहाँले पहिलो riser सेनेटरी तत्व बाट सबैभन्दा टाढाको मिलती।
जब स्वतन्त्र काम योजना आवश्यकतालाई सकेसम्म सरल हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि, पानी भुइँमा छ, र प्रत्येक उपकरण लम्ब प्रबन्धमा ट्यूब पर्खाल संरचना मा विस्तार।
Propylene पाइप फरक विश्वसनीयता, स्थायित्व र प्रयोग सजिलो, आफ्नो थाकबनाउदै लागि, पहिले उल्लेख रूपमा, एक ताप उपकरण आवश्यक छ, यो भली भांति बंद र सुरक्षित कनेक्शन प्रदान गर्नेछ।
मरम्मत र परिसर को उपस्थिति को संरक्षण को सुख गर्न पाइपलाइन को लुकेको स्थापना को सबै भन्दा व्यापक खरिद प्रकार, कारण। पहिलो हामी तल्ला र पर्खालहरु, र उपयुक्त आकार प्वालहरू सुनिश्चित गर्न आवश्यकता मा Grooves र प्रयोग सामाग्री बनाउन आवश्यक छ। अर्को चरणमा वाल्व स्थापना र सफाई को एक उपयुक्त स्तर संग फिल्टर छ। पानी मीटर र दबाब सेन्सर बारेमा भूल छैन, उत्तरार्द्ध एक स्थिर दबाव को अभाव मा विशेष महत्त्वपूर्ण छ र प्राय स्थापित मान्यता भन्दा बढी।
यो कलेक्टर धेरै आउटलेट छेद र एक उपखाडी छ जो एक सिलिन्डर छ, यसको मुख्य फाइदा सेनेटरी उपकरण जडान सुविधा छ। पछि यसलाई ताला वाल्व र एडेप्टर को आवश्यक नम्बर स्थापना गरेको छ। पनि प्रत्येक बिन्दुमा वर्दी दबाव योगदान जो तरल, एक वर्दी वितरण प्रदान गर्दछ। उत्पन्न प्वालहरू इच्छित सजावटी कोटिंग लागू हुन्छ जो प्लास्टर, पछि लुकेका छन्। थप बेफाइदा संग स्टप वाल्व फिटिंग र पाइप को एक ठूलो संख्या आवश्यक बाहेक संग्रहकर्ता आफूलाई गर्न किनभने, प्रणाली को लागत छ।
यौगिकों सजिलै पहुँच हुनुपर्छ, यो समय समयमा आवश्यक छ छाप प्रतिस्थापन र पाइपलाइन मरम्मत। पछि पाइप को स्थापना को सेनेटरी दृढता जोडिएको तत्व मा, फिटिंग निश्चित र उपभोक्ताहरु एक लाइनर रूपमा प्रयोग लचिलो Hoses।
जब प्रत्येक अन्य सम्मिलित गर्न तिनीहरूलाई को पर्याप्त निर्माण गर्न, ढल पाइप काम एक टांका फलाम लागि आवश्यकता उत्पन्न गर्दैन। जब फिटिंग कार्य सरल मदत र कमजोरीहरू पत्ता सजिलै प्रणाली निराकरण तिनीहरूलाई हटाउन मा गर्न सक्नुहुन्छ।
ताराहरु पाइपलाइन धेरै समस्या पैदा गर्दैन, र केही नियमहरू विषय बनेको:
सानो आकार संग तत्व उपयुक्त वा ठूलो व्यास भएको पाइप सम्मिलित थिए भनेर पाइप जडान गर्नुपर्छ;
पाइप को नल, शवर वाशिंग मिसिन देखि आ र यो मापदण्ड 50 मिमी हुँदा शौचालय कचौरा बाट मलजल गर्न आउटलेट, 110 मिमी भित्र हुनुपर्छ;
मुख्य riser पाइप एउटा मामूली ढलान जाने गर्नुपर्छ।
तिनीहरूले दुई उपकरणहरू पनि डेजी श्रृंखला उपकरणहरूमा सिफारिस को साथ प्रयोग संग "भीड" सक्छ रूपमा विभिन्न क्रसिंग द्वारा जटिल, नयाँ पाइपलाइन मा ताराहरु लागि खराब छ।
केही अवस्थामा त्यहाँ नाली प्वाल मार्फत clogging को सफाई मा कठिनाइ, यो समस्या ढल पाइप थप टि-फिटिङ स्थापना गरेर सरलीकृत गर्न सकिन्छ पनि मर्मत प्रक्रियामा छन्। एक प्लग बन्द छ जो आफ्नो माथिल्लो खोल्ने, माध्यम, यो चाँडै गर्न सम्भव छ यो clogging हटाउनु। यसलाई ताराहरु पाइपलाइन परियोजना एक लुकेका प्रकार को स्थापना समावेश भने, सधैं निरीक्षण र मर्मत लागि कनेक्शन पहुँच गर्न सक्षम हुनुपर्छ भनी उहाँ सम्झनुहुन्छ लायक छ।
सबै जोइन्टहरूमा वर्तमान ढल पाइप रबर छाप हुनुपर्छ, तिनीहरूले बर्बाद र गंध को रिसाव रोक्न। स्थापना गर्दा यो सबै तत्व संयोजन गर्न रूपमा राम्ररी सकेसम्म महत्त्वपूर्ण छ। स्थायी पूर्वाग्रह पर्खालहरु मा आवश्यक पाइप खण्डहरू सुरक्षित विशेष Clamps को माध्यम द्वारा को संगठन। जो स्थापित गर्न छ मुख्य तत्व बीच, यो स्टप वाल्व र strainer टिप्पण लायक छ।
वाल्व जाँच ताप लागि। यसको उद्देश्य, चयन र स्थापना
कसरी आफ्नै हातले एक ताप प्रणाली बनाउन।
पूल वेंटिलेशन: लेआउट र डिजाइन subtleties। वेंटिलेशन सिस्टम
फोम ब्लक भविष्यमा को निर्माण सामाग्री छन्।
घरहरू निर्माण। आधुनिक पारिस्थितिकी-मैत्री इन्सुलेशन।
Adnexitis लागि एन्टिबायोटिक। प्रकार adnexitis, ड्रग्स, दबाइ संयोजन
सुझाव: कसरी आंतरिक मंत्रालय संग सामना गर्न?
Mowers, खण्ड - अर्थव्यवस्था मा एक आवश्यक सहायक
बालबालिकाको शिविर "तिमोरोभेट"। Evpatoria अद्वितीय जलवायु परिस्थितियों को लागि प्रसिद्ध छ
तीतो डन: खेल समीक्षा
स्मोलेन्स्क 1941 को युद्धमा: मूल्य
परमेश्वरको आमा (फोटो) को Kozelschanskaya प्रतिमा
सुनको विवाह परिदृश्य - एक महत्वपूर्ण घटना याद गर्न
कसरी "एन्ड्रोइड" को आधारमा खेल प्रेत हाउस पिट्न?
विचार को प्लेटो गरेको सिद्धान्त: साँचो अस्तित्वको प्रकाश
र तपाईं टूर्कू सही मा घर मा कसरी कफी बनाउन थाहा?